Iyo Huru Apple Inoshandira Mamwe Masayendisiti Ekurapa kwekutsvaga IPhone nhau
Apple inoramba ichiwedzera musayendisiti wezvokurapa
Ngirozi Gonzalez | | Noticias, dzakawanda
Iro apuro hombe rave kupinda munyika yekutsvaga zvishoma nezvishoma. Kwakave kutanga kwekutanga kweKutsvagaKit neCareKit, uye runyerekupe nezvezvitsva zvekurapa muApple Watch inopfuura patent. Apple yazvitaura kanopfuura kamwe chete: vane hanya nevanhu, ndosaka vari kuyedza kugadzirisa mararamiro kuburikidza netekinoroji uye vari kubudirira. Sezvo nguva inopfuura Apple inoshandira mamwe masayendisiti uye vanhu vanokodzera munyika yekutsvaga, pamwe kuvandudza yavo yekutsvagisa mapurojekiti uye kuzadzikisa kusangana kwakazara pakati pehutano neIOS uye ese mamwe maBig Apple mapuratifomu.
Iyo Big Apple inogamuchira Sambul Ahmad Desai
Kubhadharwa kwechikamu chekutsvaga kuri kuitika nekufamba kwenguva, panguva ino ndezve Sambul Ahmad Desai, aimbove director director weStanford School of Medicine akatarisa nharembozha uye kusanganisa kwetekinoroji uye hutano.
Desai parizvino akabata chinzvimbo cheMutevedzeri weMutungamiriri weChirongwa neInnovation mukati meChikoro cheDhipatimendi reMishonga, pamusoro pe kutungamira iyo Dhijitari Strategic uye neInnovation sevhisi kuStanford Chikoro cheMishonga. Hupenyu hwake hwave hwakabatana nekubatanidza kiriniki kushanya kwevarwere mumidziyo, senge system DzvanyaWell.
Zvese izvi zvekubhadhara zvine chekuita nezve ecosystem yeiyo Apple Tarisa, kana zvirinani izvo zvakaratidza Tim Cook nezvake zvirevo mubvunzurudzo svondo rapfuura:
Iyo Holy Grail yeiyo wachi iri kugona kudzora zvakanyanya uye zvakanyanya zviri kuitika mumuviri wedu. Kana isu tikakwanisa kuve nechishandiso icho chinoziva zvakawanda nezvedu, zvingave zvinoshamisa, uye zvinowedzera uye kuwedzera hupenyu hwehupenyu.
Ichokwadi ndechekuti Apple Watch ine kugona kukuru, kwete chete sedhizaiti asi se murevereri pakati pemushandisi uye hutano. Nemapurogiramu anokurudzira mushandisi kurovedza muviri, chengeta mazano pane zvezuva nezuva maitiro kana kudzora kuwanda kweropa kuburikidza nemidziyo chishandiso chakanaka chekutsigira hwaro hwesainzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Apple inoramba ichiwedzera musayendisiti wezvokurapa
Nyowani nyowani muwatchOS 4 yekukukorokotedza iwe pazuva rako rekuzvarwa